Mon, Jan 20, 2020 at 3:40pm
छाउपडी सिङ्गो देशको समस्या : मन्त्री गुरुङ #आहा खबर# विग ब्यासमा सन्दीप सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको पाचाैँ स्थानमा #आहा खबर# सुर्तीजन्य पदार्थसहित तीन पक्राउ #आहा खबर# १० दिनपछि रेल उपकरण नेपाल आईपुग्ने #आहा खबर# नेकपाको ११ बुँदे आचारसंहिता : नेता कार्यकर्ताले कसैलाई पनि तँ भन्न नपाइने #आहा खबर# अमित शाहलाई विस्थापित गर्दै जेपी नड्डा बने भाजपा अध्यक्ष #आहा खबर# सभामुखको निर्वाचन माघ १२ गते, उम्मेदवारी दर्ता मङ्गलबार #आहा खबर# उपसभामुख तुम्बाहाङफेले दिइन् राजीनामा #आहा खबर# एकै दिन लागुऔषधसहित तीन युवक पक्राउ #आहा खबर# कालीगण्डकीमा रोमाञ्चकारी जलयात्राको मज्जा लिने कि ? #आहा खबर# जाडोमा पानी पिउन मन लाग्दैन ? यस्ता कुरामा ध्यान दिनुहोस् #आहा खबर# सभामुखमा सापकोटाको प्रस्ताव प्रति कांग्रेसको आपत्ति #आहा खबर# ओली -प्रचण्ड छलफल सकियो, उपसभामुखले राजीनामा दिने #आहा खबर# प्रधानमन्त्रीको आश्वासन- ‘उचित समयमा, उचित जिम्मेवारी दिन्छु’ #आहा खबर# पाँच जलविद्युत् आयोजना २३ अर्बभन्दा बढी लगानीमा बन्दै #आहा खबर#
शनिबार, ११ जेष्ठ २०७६,	आहाखबर	1.7K
चितवन, ११ जेठ ।
विदेशमा छ वर्षको बसाईपछि फर्किएका भुवनराज अधिकारीले परिश्रम गर्यो भने स्वदेशमै त्यहाँको भन्दा राम्रो कमाइ गर्न सकिन्छ भन्ने बल्ल अनुभव गर्नुभयो ।
दुबईमा मासिक रु ३० हजार हाराहारी कमाइ गर्नुहुने अधिकारीले अहिले दैनिक १५ हजारभन्दा बढीको व्यापार गर्नुुुहुन्छ ।
भरतपुर महानगरपालिका–६ चोकबजार निवासी अधिकारी विसं २०६० बाट छ वर्ष दुबई बसेर स्वदेशमै केही गर्ने योजना बुन्दै नेपाल फर्किनुभयो । चोक बजारमै काकाले शुरुआत गरेको होटल उहाँले सम्हाल्नुभयो । होटलको नाम थियो अधिकारी रेष्टुराँ ।
खाजा पाक्थ्यो भुटन र मटन । उत्साहित हुँदै अधिकारीले भन्नुभयो, “पहिलो दिनमा मैले रु छ हजारको व्यापार गरेँ, निकै खुशी लाग्यो ।” उहाँको होटलमा दैनिक स्थानीय जातको खसी काटेर भुटनका परिकार बनाइन्छन् ।
व्यापार बढ्दै गएपछि उहाँ उत्साहित हुँदै जानुभयो । बजार नजिकै एक कट्ठा जग्गा किनेर घर र रेष्टुराँसँगै बनाउनुभयो । अधिकारीले अहिले दैनिक रु १५ हजारको हाराहारीमा व्यापार गर्नुहुन्छ । श्रीमती अम्बिका र एकजना कामदारले उहाँलाई सघाउँदै आएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “विदेशको कमाइभन्दा यहाँ धेरै राम्रो छ, म सन्तुष्ट छु ।” दुई सन्तान छन् अधिकारीका ।
छोरीले निजी विद्यालयबाट एसइई दिएकी छिन् भने छोरा निजी विद्यालयमा पढ्दै छन् । दुई सन्तान पढाउनेदेखि घरखर्च टार्दै बचत पनि गर्न सकेको अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
एकै प्रकारको खाजा खुवाउने हुँदा जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट ग्राहक आउने गरेको उहाँको भनाइ छ । बैंकका कर्मचारी, शिक्षक, घर जग्गा व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी उहाँका नियमित ग्राहकजस्तै छन् ।
आफ्नै घर भएकाले भाडा तिर्न नपर्ने र कर्मचारी एकजना मात्रै भएकाले बचत राम्रो हुने गरेको छ । अधिकारीले भन्नुभयो, “लगन लगाएर काम गर्यो भने नेपालमै केही गर्न सकिन्छ ।” नियमित खट्दा उपलब्धि हुन्छ भन्ने अनुभव उहाँले गर्नुभएको छ ।
खसीको मासु बनाउने तरिका
खसीको मासु हरेक जसो नेपाली परिवारको भान्सामा पाक्ने गर्छ। तर केही कुरा, केही कुरा थपेर खसीको मासुलाई थप स्वादिष्ट बनाउन सकिन्छ।
टमाटर, लसुन र अदुवा, धनियाँ, सुकेको खुर्सानी
जीरा, गरम मसला, प्याज, नुन, बेसार, तोरीको तेल
खुर्सानीको धुलो, तेजपत्ता सुकमेल लगायतका मसला
सुरुमा जीरा र धनियाँलाई पिस्ने र त्यसपछि लसुन अदुवा राखेर पिस्ने।
अब त्यो मसलालाई मासुमा राख्ने र राम्रोसंग मोल्ने ।
त्यसपछि त्यसमा नुन, तेल, बेसार राखेर मोल्ने ।
राम्रोसनग मोलेपछी छोपेर राख्ने ।
अब एउटा भाँडामा तेल तताउने र तेल तातेपछि प्याज फुराउने ।
प्याज खैरो भएपछी टमाटर राख्ने र केही छिन छोपेर पाक्न दिने ।
त्यसपछि त्यसलाई सेलाउन दिने र पेस्ट बनाउने ।
अब एउटा भाँडोमा तेल तताउने र तेल तातिसकेपछि तेज्पत्ता, सुकमेल लगायतका मसला फ्राई गर्ने ।
फ्राई गरेपछि त्यसमा मासु राख्ने र पकाउने ।
अब मासुलाई चलाउने र त्यसमा गरम मसला र प्याज टमाटरको पेस्टलाई राख्ने ।
त्यसपछि त्यसलाई राम्रोसंग चलाउने र छोपेर पकाउने।
सुर्तीजन्य पदार्थसहित तीन पक्राउ